I-5 ephezulu yase-UK isasaza iiBroker eziBheja ngoNovemba 2021 | Funda ukuRhweba
AmaQela eTelegram amaQela aSimahla ama-2021
AmaQela eTelegram amaNgcaciso asimahla ama-2021
I-5 ephezulu yokusasaza i-Broker Broker e-UK-Isikhokelo esipheleleyo se-2021!
31 Matshi 2020 | Ukuhlaziywa: 22 January 2021
Ukusasaza ukubheja ikuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo lesixhobo semali ngaphandle kokuthatha ubunini beasethi. Cinga kwimigca yeemali, izitokhwe, ii-indices, igolide, ioyile kunye negesi yendalo. Ngale ndlela, abathengisi ababhejayo abasasazekayo basebenza kakhulu njengamaqonga e-CFD.
Nangona kunjalo, isibonelelo esigqithisileyo sokukhetha ukusasaza ukubheja ngaphezulu kwezinye iimveliso zotyalo mali kukuba awuzukufuna ukuhlawula irhafu kwiinzuzo zakho. Ngapha koko, ukusasaza abathengi ukubheja kukuvumela ukuba ube nezinto ezimfutshane, oko kuthetha ukuba ungazuza xa ixabiso leasethi lisihla.
Ngale nto ithethwayo, singacebisa ukuba sifunde isikhokelo esinzulu ngaphambi kokuba sahlukane nemali yakho. Sichaza i-ins kunye nokuphuma kokusasazeka kokubheja, ukuba kusebenza njani, ukuba inzuzo kunye nelahleko zibalwa njani, kwaye okona kubalulekileyo- zezona ziqonga zihlanu zibalaseleyo kwintengiso yase-UK.
Qaphela: Ngokungafaniyo notyalo mali ngokwesiko, ungaphulukana nemali yakho eseleyo kurhwebo olunye ukuba awuyifaki ilahleko enengqondo. Ekugqibeleni, kufuneka uqonde ubungozi bokusasaza ukubheja ngaphambi kokuba ungene.
I-EagleFX-Elona qonga liphambili lokuRhweba ngeForex
Ukusasazeka okuphantsi kunye nesantya soku-odola ngokukhawuleza
Kwindlela yayo esisiseko, ukusasaza ukubheja yinkqubo yokuthelekelela kwicala elizayo lweeasethi zemali zesintu ezinje ngesitokhwe, izinto zorhwebo, kunye nezalathiso. Kwimeko efanayo neCFD (iikhontrakthi-zomahluko) iimveliso, awunayo i-asethi esezantsi xa usasaza ukubheja. Ngokuchasene noko, ucinga nje ukuba ixabiso le-asethi liza kuhamba njani kwindawo yentengiso evulekileyo.
Kuninzi onokukufunda malunga nokusasaza ukubheja, ubuncinci kuba isebenza ngendlela eyahlukileyo ngokupheleleyo kwezinye iimveliso zotyalo-mali. Okokuqala nokuphambili, inzuzo kunye nelahleko zimiselwa linani lamanqaku 'apho i-asethi ishukuma ngokunxulumene nexabiso ovula ngalo urhwebo. La manqaku ayaphindaphindwa ngesibonda sakho.
Umzekelo, masithi i-FTSE 100 ixabiswe ngamanqaku ayi-5,000 10, kwaye ubambe inani elipheleleyo le- $ 100 ngenqaku ngalinye kwixabiso elinyukayo. Ukuba i-FTSE 100 inyuka ngamanqaku ayi-5,100 ukuya kuma-100, oku kuthetha ukuba uyakwenza inzuzo eyi- $ 10 (£ 100 x 100 points). Ngokufanayo, ukuba i-FTSE 100 yehle ngamanqaku ayi-100, ungaphulukana ne- £ XNUMX. Kungenxa yoko le nto ukusasaza ukubheja kuyingozi enkulu kunendlela yotyalo-mali yemveli, njengoko ungaphulukana nokuninzi kunokuba ubulindele.
Kwicala elisezantsi, ukusasaza ukubheja kuluncedo kakhulu ngenxa yezizathu ezininzi. Ngokungafaniyo nezinto zesintu, ukusasazwa kweenzuzo zokubheja aziqhelwanga kwirhafu yokufumana imali. Oku kuthetha ukuba uza kugcina yonke inzuzo yakho, hayi ubuncinci kuba iimbono ze-HMRC zisasaza ukubheja njengokungcakaza.
Qaphela: Njengoko uthengisa kumda - okuthetha ukuba ungarhweba ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho, ezinye iindawo ezisasazwayo zokubheja ziqhuba ngetyala ngaphambi kokuvuma isicelo seakhawunti.
Ngapha koko, ukusasaza ukubheja kukuvumela ukuba 'ufutshane'. Kulabo abangaziyo, oku kuthetha ukuba uqikelela kwixabiso leasethi oyikhethileyo ukuba uye ezantsi. Le ayisiyonto ingafumaneki kwimeko yezemali yemveli. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukusasaza ukubheja akunjalo ngokungafaniyo urhwebo lwangaphandle, njengoko ufuna kuphela ukubeka iqhezu lobungakanani bakho kurhwebo.
Iinkonzo kunye neengozi zokuSasaza ukuBheja abaRhwebi
Fikelela kumawaka ezixhobo zemali ngokucofa nje iqhosha
Iimpahla zorhwebo ngaphandle kobunini
Amandla okuhamba ixesha elifutshane kunye elifutshane
Zonke iinzuzo zokubheja ezisasazwayo azikho kwirhafu
Ukusasazeka kunye nemirhumo ziphantsi kakhulu kunamaqonga otyalo mali emveli
Ukunyusa kukuvumela ukuba urhwebe ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho
Iimfumba zabakhokeli bokubheja abasasazekayo abakhonza abathengisi base-UK
Udidi lotyalo-mali olunomngcipheko omkhulu
Ungaphulukana nayo yonke ibhalansi yeakhawunti yakho kwintengiso enye
Inzima ngakumbi kuneeklasi zeeasethi zemveli
Kusasazeka njani ukuBheja?
Ukusasaza ukubheja yicookie enzima yokuqhekeza ezo zintsha kuyo. Esona sizathu siphambili soku yindlela ekubalwe ngayo ukuba urhwebo lwakho lubaliwe. Umzekelo, ayisiyiyo kuphela ukuba kufuneka uqonde inkqubo yamanqaku esasaza ukubheja kubathengi, kodwa kuya kufuneka uqonde ukuba oku kunxulumene njani nesibonda sakho. Kuya kufuneka ube uqonde ngokuqinileyo ukuba zeziphi 'ezinde' kunye 'ezimfutshane' iiodolo, kunye nokuba ungayinyusa njani inzuzo okanye ilahleko.
Kananjalo, apha ngezantsi sixoxa ngezinye zezinto eziphambili ekufuneka uziqonde ngaphambi kokuqala ukusasaza uhambo lwakho lokubheja.
Ngokungafaniyo nabarhwebi bendabuko kwi-Intanethi, ukusasaza abathengisi ababhejayo kukunika ithuba lokuhamba ixesha elide okanye elifutshane. Ukuba uza kuhamba ixesha elide, ubeka i-oda yokuthenga. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba uqikelela kwixabiso leeasethi eliya kunyuka.
Umzekelo, ukuba ucinga ukuba ixabiso lesitokhwe sikaMicrosoft liza kunyuka kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, uya kuhamba ixesha elide ngokubeka iodolo yokuthenga. Kwesinye isiphelo sebala, abo bahamba kancinci bacinga ukuba ixabiso leasethi liza kuhla.
Kananjalo, uya kubeka iodolo yokuthengisa. Oku kukuvumela ukuba uzuze nangona iimarike ezibanzi zikukuhla.
Verage Ukuphakamisa kunye noMda
Xa usebenzisa eqhelekileyo urhwebo lwesitokhwe iqonga uyacelwa ukuba uthenge izabelo ngokuthe ngqo. Ngamanye amagama, ukuba ufuna ukuthenga ama- £ 500 amaxabiso ezabelo zeCuba yaseBritane yaseMelika, kuya kufuneka uxhase nge- $ 500 epheleleyo. Oku kwahluke mpela kwindlela ezisebenza ngayo iisayithi zokubheja, njengoko kufuneka kuphela ukuba ubeke 'umda'
Umzekelo, masithi uthengisa udidi lweeasethi ezinamanzi kakhulu njenge-FTSE 100. Njengokuba ungenayo i-asethi engaphantsi, ukusasazwa kwamaqonga okubheja akuvumela ukuba urhwebe kumda. Ukuncamathela kumzekelo ofanayo njengasentla-kwaye ucinga ukuba umrhwebi ufuna umda we-20%, oku kuthetha ukuba uya kufunwa kuphela ukuba ubeke i-oda yakho ye-American American Tobacco order ngomda we-500.
Qaphela: Njengoko sigubungela ngakumbi kamva, ukuba urhwebo lwakho lokubheja lusasazeka ngokuchasene nawe ngaphezu kokuba ubeke kumrhwebi, urhwebo lwakho luya kupheliswa. Oku kuthetha ukuba uya kuphulukana nomgama wakho.
Umda othile ofunwa ngumrhwebi awuzukuhluka kuphela ngokuxhomekeke kwiqonga, kodwa nakwiklasi yeasethi. Umzekelo, ngelixa iiasethi ezinamanzi kakhulu ezinje nge-forex kunye nee-indices ziya kufuna ipesenti encinci kakhulu yomda, ezinye iiasethi ezinje ngeemali ezixabisa kakhulu ziya kufuna okungakumbi.
Ubungakanani beBet kunye namanqaku
Xa kuziwa kwinzuzo kunye nelahleko kwiindawo zokubheja ezisasazekileyo, oku kusekwe kwinkqubo yamanqaku. Ukuba ngaphambili wawuthengisa nge-intanethi kwi-intanethi, oku kusebenza ngendlela efanayo 'iipipi'. Kananjalo, isixa osenzayo okanye osiphulukileyo siya kuxhomekeka kwinani lamanqaku ashukumayo, kunye nendlela eya kuyo.
Makhe sijonge umzekelo okhawulezayo wendlela esebenza ngayo inkqubo yamanqaku xa usasaza ukubheja.
Masithi uthengisa isalathiso se-S & P 500
Ixabiso le-S & P 500 livula usuku kumanqaku ayi-2,541 XNUMX
Ekupheleni kokurhweba, i-S & P 500 inexabiso kuma-2,571 XNUMX amanqaku
Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini ngamanqaku angama-30.
Emva koko kufuneka siphindaphinde umahluko wamanqaku ngokuchasene nesibonda sethu.
Masithi ubeke i- £ 50 ngenqaku ngalinye kwi-S & P 500. Inye kuphela iziphumo ezibini ezinokwenzeka.
Ukuba uhambe ixesha elide, uya kuba nakho Zenziwe Inzuzo ye- £ 180 (amanqaku angama-30 x £ 50)
Ukuba uye wafutshane, ubuya kuba ezilahlekileyo I- £ 180 (amanqaku angama-30 x £ 50)
Ngenxa yoko, kubaluleke kakhulu ukuba uqonde ukuba izikhonkwane zakho zinxulumana njani neenzuzo zakho okanye ilahleko.
Qaphela: ii-indices zeemarike zentengiso ezinje nge-FTSE100 kunye ne-S & P 500 sele zichaziwe kumanqaku, ke oku kulula. Nangona kunjalo, ezinye iiasethi ezinje ngesitokhwe zixabiso lazo ngeepawundi kunye neepeni, ke kufuneka ziguqulwe zibe ngamanqaku. Umzekelo, ukuba ixabiso lezabelo zeBarclays li- $ 97.37, ke oku kufikelela kumanqaku angama-9737.
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba izibonda, inzuzo, kunye nelahleko zibalwa njani ekubheja ukubheja, kuya kufuneka ube nokuqonda ukuba yintoni ukusasazeka. Ngamafutshane, ukusasazeka ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso leasethi, kwaye yindlela abasasazi ababhejayo abasasaza ngayo imali.
Masithi ixabiso lehlabathi lokwenyani kwi-GBP yi- $ 30.5
Ixabiso lokuthenga ngegolide yi- $ 31
Ixabiso lokuthengisa kwigolide yi- $ 30
Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini ngu-1, ke ukusasazeka kwegolide kuku-1
Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba ngokubanzi ukusasazeka, kokukhona kubiza iindleko zakho ukurhweba. Ngokufanayo, ziqinile Ukusasazeka kubiza kakhulu. Kungenxa yokuba kuya kufuneka uzuze ubuncinci ukusasazeka ukuze uphule. Ngamanye amagama, xa ubeka i-oda yokuthenga kwigolide, uhlawula ngaphezulu kwexabiso layo.
Kananjalo, ngokuhlawula i- $ 31 xa ixabiso lokwenyani legolide kwi-30.50 ye- £ kuphela, sele ungasasebenziyo ngamanqaku ayi-0.50. Ukuba ubunokuthengisa utyalo-mali lwakho ngoko nangoko, uya kuba wenza ilahleko ye-0.50 kuyo yonke i- £ 1 oyibethileyo. Kuyafana ngokuthengisa iiodolo, kodwa ngasemva.
Ixesha lokubheja ekusasazeni ukubheja libhekisa kubude bexesha urhwebo lwakho oluya kuhlala luvulekile lude luphele. Oku kuyokwahluka ngokuxhomekeke kwiasethi ethile oyithengisayo, nangona kunjalo, iya kuba ikwimo yesinye sezihlandlo ezibini- ukubheja mihla le okanye ukubheja ngekota.
Ubhejo wemihla ngemihlaUkubheja ngemali mihla le kufanelekile kwabo banqwenela ukuzibandakanya kurhwebo lwexeshana. Kungenxa yokuba ibhalansi yakho iya kulungelelaniswa ngumthengisi wokubheja osasazwayo ekupheleni kosuku ngalunye. Ngelixa ukhululekile ukugcina indawo yakho ivulekile okoko unqwenela, iindleko zenkxaso-mali ziya kuqala ukuyitya inzuzo yakho, ke yigcine engqondweni.
Ngekota Ubhejo: Njengoko igama libonisa, ukubheja okusasazekayo ngekota kuneenyanga ezintathu. Kwiimeko ezininzi, iiasethi ezingaphantsi ziya kumelwa sisivumelwano sexesha elizayo. Oku kufaneleke ngakumbi kunabo banqwenela ukubandakanyeka kurhwebo lwexesha elide, ubuncinci kuba uya kuba nakho ukugcina isikhundla sakho sivulekile ngaphandle kokuhluthwa ziindleko zenkxaso-mali.
Umzekelo weVodaphone Spread Bet
Ke ngoku ukuba uqonda ngokuqinileyo kwimigaqo emininzi ekufuneka uyenzile xa usasaza ukubheja, masijonge kumzekelo obanzi.
Ujonge ukuthengisa izabelo zeVodaphone, ezithengisa kwiLondon Stock Exchange
Ixabiso langoku lemarike lezabelo yi- $ 119.94. Njengoko besitshilo ngaphambili, oku kuya kuguqulela kumanqaku ayi-11994.
Ukusasazeka kwizitokhwe zeVodaphone ngamanqaku angama-50. Ke, ixabiso 'lokuthenga' li-12,044, kwaye ixabiso 'lokuthengisa' li-11,944.
Ucinga ukuba ixabiso lezabelo zeVodaphone lixabise kakhulu, ke ubeka i-odolo yokuthengisa kwi-11,944.
Ugqiba kwelokuba ubeke isibonda se- $ 2 ngenqaku ngalinye.
Kwiiyure ezimbalwa emva kokubeka urhwebo, izabelo zeVodaphone ngoku zithengisiwe nge- $ 117.94, eyi-11,794 yamanqaku.
Ukutshixa kwiinzuzo zakho, kuya kufuneka ubeke i-'othe 'yokuvala urhwebo. Ukuthathela ingqalelo ukusasazeka kwamanqaku angama-50, oku kufikelela kumanqaku ayi-11,844.
Ngokomzekelo ongentla, sisiphumo sorhwebo lwakho:
Ubeke i-odolo yokuthengisa nge-11,944 kwaye emva koko uthenge i-odolo kamva ngosuku kwi-11,844
Umahluko kumanqaku phakathi kwamaxabiso amabini yi-100.
Isibonda sakho sasiyi- £ 2 ngenqaku, ke siyaphindaphinda ngamanqaku ayi-100
Inzuzo yakho iyonke kurhwebo yi- $ 200
Iingozi zokusasaza ukubheja
Ngelixa sigxile kweli phepha kwizibonelelo zokusasaza abathengisi ababhejayo ngokuthelekisa amaqonga emveli, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba umngcipheko uphezulu kakhulu. Phambili koku kukukwazi kwakho ukulahla umda wakho wonke. Oku kuyakwenzeka ukuba urhwebo lwakho luchasene nawe ngaphezulu kunokuba unemida.
Ke, masithi uthengisa i-FTSE 100, kwaye umthengisi wakho ufuna umgama we-20%. Ngokwenqaku ngalinye lesibonda esikhethiweyo, umrhwebi ufuna umgama opheleleyo we- $ 200 kuwe.
Ubeka iodolo yokuthenga ye- $ 10 ngenqaku ngalinye, kwaye ixabiso langoku le-FTSE ngamanqaku ayi-3,000. Emva kwemini, i-FTSE iyehla ngamanqaku ali-18, oko kuthetha ukuba ujonge kwilahleko ye- $ 180 (amanqaku angama-18 x £ 10).
Okwangoku, umrhwebi uza kukuthumelela isaziso esikwazisa ukuba urhwebo lwakho lusemngciphekweni wokupheliswa, okuthetha ukuba luya kuvala ngokuzenzekelayo. Ukuba awenzi nto kwaye i-FTSE iyehla ngamanye amanqaku ama-2, oku kuthetha ukuba urhwebo lwakho yi- $ 200 ezantsi. Njengoko oku kubonakalisa i-margin yakho engama-200, urhwebo luya kuvalwa ngokuzenzekelayo kwaye uya kulahleka i- £ 200 yonke.
Ngenye indlela, ukuba ubeka ngaphezulu kwe- $ 100 kumda, urhwebo lwakho alunakupheliswa njengoko uzinike indawo yokuphefumla. Olu xabiso longezelelekileyo lwe- $ 100 kwi-net yokhuseleko lwamanqaku ali-10 ngaphezulu, ngokusekwe kwisibonda sakho se- $ 10 ngenqaku ngalinye.
Ukufaka i-Stop-Loss kunye nokuthatha iiMiyalelo zeNzuzo
Mkhulu umngcipheko xa usasaza ukubheja, ungawunciphisa lo mngcipheko ngokufaka i-odolo yokuyeka. Ngokufana neemarike zemali zemveli, i-stop-loss order ikuvumela ukuba uchaze ixabiso onqwenela ukuba urhwebo luvaliwe ngokuzenzekelayo. Nokuba uyi-newbie okanye umrhwebi onamava, ilahleko yokumisa ibaluleke kakhulu ukuba ufuna ukunqanda ukulahleka kwemali eninzi.
Nanku umzekelo wendlela i-odolo yokuyeka ilahleko enokunciphisa ngayo ilahleko xa usebenzisa umthengisi wokubheja osasazekileyo.
Ubeka i-oda yokuthenga kwizabelo ze-BP kumanqaku angama-31,000, kwisibonda se- $ 0.10 ngenqaku ngalinye
Awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-10% yemida yakho, ke ubeka i-odolo yokulahleka kwindawo engama-27,900 (amanqaku angama-31,000 ngaphantsi kwe-10%)
Emva kwemini, izabelo zeBP ziqala ukuya kwitanki kwiindaba zokunyuka kweoyile eMbindi Mpuma.
Izabelo zeBP ziyehla ziye kuma-24,800, ngewube ujonge kwilahleko iyonke yamanqaku ayi-6,200, athi nge-0.10 iphawundi, alingane ne- £ 620
Nangona kunjalo, njengoko i-odolo yakho yokuyeka ilahleko yafakwa kumanqaku angama-27,900, ilahleko yakho yehla yaya kutsho kumanqaku ayi-3,100, okanye i-10%. Kananjalo, uphulukana ne- £ 310 endaweni ye- £ 620.
Kubalulekile njengokufaka ii-odolo zokulahleka xa usebenzisa i-broker yokubheja esasazekileyo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukongeza iodolo yenzuzo. Oku kusebenza ngokuchanekileyo ngendlela efanayo ne-stop-loss order, kodwa ngasemva. Ngamanye amagama, uza kuchaza ixabiso ongathanda ukuvala urhwebo ngalo xa unenzuzo. Oku kukuvumela ukuba utshixe kwiinzuzo zakho xa ukude kwisixhobo sakho.
Ngaba ukuSasaza iRhafu yeNgeniso simahla?
Ngamafutshane, iinzuzo zokubheja ezisasazwayo zikwi-100% zikhululwe kumatyala erhafu ase-UK. Oku kuluncedo kakhulu, njengoko zonke ezinye izibonelelo zotyalo-mali zinoxanduva lerhafu. Umzekelo, izabelo zinoxanduva lokuhlawula irhafu, kwaye ukuthengisa isitokhwe ngaphezulu kokuhlawulayo kuya kukhokelela kwirhafu yokufumana imali.
Nangona kunjalo, njengoko i-HMRC ijonga ukusasaza ukubheja njengokungcakaza (oko kukuthi, kunjalo), uya kugcina zonke izibonelelo zakho ngaphandle kokuhlawula ikhulu lerhafu. Xa kuthethwa oko, ukuba ungumrhwebi ongeyena wase-UK kwaye usebenzisa i-UK ukusasaza i-broker yokubheja, le mithetho ayinakuhlala ihleli.
Oku kunjalo ngakumbi ukuba ungumhlali wase-US ngeenjongo zerhafu, ke jonga ingcali efanelekileyo ukuze ufumane impendulo echanekileyo.
Uyikhetha njani i-Spread Broker yokuSasaza?
Ukuze uyazi ii-ins kunye nokuphuma kwendlela ezisebenza ngayo iisayithi zokubheja, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ngomthengisi onqwenela ukungena naye. Nangona inani le-UK lisasaza iindawo zokubheja ziyimizuzu xa kuthelekiswa ne-forex, i-CFD, kunye nabathengisi bendabuko kwi-Intanethi, kusekho iimfumba zamaqonga onokukhetha kuwo.
Kananjalo, singacebisa ukwenza oku kulandelayo ngaphambi kokujoyina umthengisi omtsha wokubheja.
Ngaphambi kokuba ucinge malunga neemetrikhi ezinje ngokusasazeka, iifizi, kunye neendlela zokuhlawula, kuya kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho wokubheja osasazwayo ulawulwa. Into enomdla kukuba, nangona i-UK ichaza ukuba ukubheja kusasazekile kwicandelo elifanayo nokungcakaza, ayilawulwa ngabalindi base-UK kwiKhomishini yoNgcakazo.
Endaweni yoko, iGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA) linoxanduva lokulawula ukusasazeka kwabarhwebi. Kananjalo, ukuba umrhwebi wakho omkhethileyo akanayo ilayisensi yeCAFA, vele uhambe.
Kuya kufuneka ke uqale ngokucinga ngeentlobo zeeasethi onqwenela ukuzithengisa. Ukusasaza abathengisi bokubheja kukunika ukufikelela kumawaka ezixhobo zemali kwiiklasi ezininzi zeeasethi.
Cinga kwimigca yesitokhwe kunye nezabelo, ii-indices, amandla, izinyithi ezixabisekileyo, ikamva, ukhetho kunye ne-cryptocurrensets. Ungajonga ukuba zeziphi iiasethi ezixhaswayo ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Ukuba ujonge ukwenza imali xa usasaza ukubheja kwi-Intanethi, kuyakufuneka ubeke imali yokwenene-yelizwe. Eyona ndlela ilula yokufumana imali kwi-broker yokubheja isasazeka ngekhadi ledebhithi, nangona ukuhanjiswa kweebhanki kunye ne-e-wallets ngamanye amaxesha kuxhaswa.
Yiya nomrhwebi ohambisa iindlela ozikhethileyo zokuhlawula.
Ukusasazeka kunye neeKhomishini
Ubungakanani be sasaza iyalela ukuba uza kuhlawula malini ngokungathanga ngqo ukurhweba ngeasethi ethile. Kananjalo, qiniseka ukujonga ukusasazeka okuphakathi okubonelelwa ngumrhwebi kwisixhobo sakho esikhethiweyo sezezimali.
Nangona uninzi lwabarhwebi lukuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekhomishini, abanye baya kutsala imali kwintengiso enenzuzo. Qiniseka ukuba ujonga oku ngaphambi kokuba ubhalise.
Uhlobo olufanayo kwiincwadi zezemidlalo ezikwi-Intanethi nakwiindawo zokungcakaza, abathengisi ababhejayo abasasazayo bahlala bekunika ukubhalisa ibhonasi. Ibhonasi inikezelwa njengenkuthazo kwabo kungasayi kuvulwa iakhawunti, kwaye iimali zihlala zondliwa njengoko ufikelela kumanqanaba athile orhwebo.
Ekugqibeleni, ngokukhetha indawo yokubheja esasazekayo ebonelela ngeebhonasi zokubhalisa kubathengi abatsha, uya kuba nakho ukonyusa i-bankroll yakho yokuqala.
Ungalibali ukuphonononga ukuba isebe lenkonzo yabathengi linjani kwi-broker yakho oyikhethileyo yokusasaza. Okokuqala, jonga ukuze ubone ukuba zeziphi iindlela zoncedo ezinikezelwayo-ezinje ngengxoxo ebukhoma, umnxeba kunye ne-imeyile. Okwesibini, vavanya ukuba zeziphi iiyure ezisebenza liqela elixhasa abathengi.
Sikhetha abathengisi abanikezela ngenkonzo kubathengi nge-24/7.
Ungayijoyina njani i-Spread Broker yoBhejo-ngeNyathelo ngeNyathelo lokufundisa
Njengesandi sokusasaza ukubheja okunikezelayo kwiinjongo zakho zexesha elide lotyalo-mali kwaye ufuna isikhokelo malunga nendlela yokuqalisa? Ukuba kunjalo, landela isikhokelo esinyathela ngenyathelo ngenyathelo esichazwe apha ngezantsi.
Inyathelo 1: Khetha i-UK Spread Broker yokuBheja
Izibuko lakho lokuqala lokutsalela umnxeba iya kuba kukukhetha ukusasaza umrhwebi oza kubanako ukuhlangabezana neemfuno zakho zorhwebo. Eyona ndlela isebenzayo yokwenza oku kukujonga icandelo elingentla- apho sidwelisa khona iimetriki ezininzi ekufuneka uzijongile ngaphambi kokukhetha iqonga elitsha.
Ukuba awunalo ixesha lokwenza uphando lwakho, singacebisa ukuba sihlolisise ukufaneleka kwabahlanu kubarhwebi ababhejayo abacebise ukuba siqhubele phambili kweli phepha. Zonke ii-brokers ziye zaphononongwa kwangaphambili ukuqinisekisa ukuba ziyahlangabezana neekhrayitheriya zethu ezingqongqo.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti
Nje ukuba ukhethe i-UK ukusasaza umrhwebi wokubheja, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Inkqubo ayifane ithathe ngaphezulu kwemizuzu emihlanu kwaye ifuna ulwazi oluthile kuwe.
Oku kubandakanya eyakho:
Uya kuthi emva koko ubuzwe ukuba uphendule imibuzo malunga nolwazi lwakho kunye namava angaphambili okusasaza ukubheja. Oku kukuqinisekisa ukuba uyayiqonda imingcipheko ngaphambi kokuba yahlukane nemali yakho.
Inyathelo 3: Qinisekisa isazisi
Ukuze uhlale uthobela i-FCA, bonke abarhwebi base-UK abasasazayo kufuneka baqinisekise ubungqina bakho. Awudingi ukuyenza kwangoko, kodwa kufuneka yenziwe kwisithuba seeyure ezingama-72 zokuvula iakhawunti yakho - okanye xa uqala ukukhupha imali (nokuba yeyiphi eza kuqala).
Konke okufuneka ukwenze kukulayisha ikopi ecacileyo yakho:
Isazisi esikhutshwe nguRhulumente (ipaspoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba)
Ubungqina beDilesi (ityala elisebenzisayo, ingxelo yeakhawunti yebhanki, njl.
Inyathelo 4: Iimali zeDeposithi
Ngoku kuya kufuneka ubeke imali. Iindlela ezithile zokuhlawula ezikhoyo kuwe ziya kuxhomekeka kubathengi bokubheja osasazekileyo osikhethileyo. Nangona kunjalo, oku kunokwenzeka ukuba kubandakanya enye okanye ngaphezulu koku kulandelayo:
Ikhadi ekufakwa imali
UkuGqithisela iAkhawunti yeBhanki
Isipaji se-E (iPaypal kunye / okanye iSkrill)
Inyathelo 5: Beka urhwebo lokusasaza ukubheja
Kuya kufuneka ngoku une-akhawunti esasazeka ngokupheleleyo yokubheja eqinisekisiweyo. Kananjalo, ngoku ukulungele ukuqala ukurhweba!
Nantsi oku kufuneka ukwenze:
Khetha into onqwenela ukuyithengisa (umzekelo, isitokhwe seApple)
Thatha isigqibo sokuba uyafuna ukuhamba ixesha elide (thenga iodolo) okanye mfutshane (thengisa iodolo)
Misela isigxina sakho ngenqaku ngalinye
Cwangcisa ukuyeka kwakho ukulahleka kunye nokuthatha inzuzo
Beka urhwebo lwakho
Ama-5 aphezulu aSasaza ukuBheja eBrithani
Awunalo ixesha elifunekayo lokuphanda ngebroker yokubheja ngokwakho? Ukuba kunjalo, apha ngezantsi sidwelise iindawo ezintlanu ezisasazekayo zokubheja ezisebenzayo ngoku kwindawo yase-UK.
1. IG-Eyona ndawo ijikelezayo yokuSasaza uBroker
Iphehlelelwe indlela emva ngo-1974, IG yenye ye-CFD ethembekileyo, i-forex, kunye nabasasazi ababhejayo kwindawo ye-Intanethi. Iqonga libonelela ngaphezulu kweemarike ezili-17,000-emva koko zigubungela zonke iiklasi zee-asethi ezinokubakho.
Oku kubandakanya isitokhwe, isinyithi, ii-indices, amandla, amaxabiso enzala kunye nokunye. Ukusasazeka kukhuphiswano olukhulu kakhulu. Umzekelo, i-EUR / USD inokurhweba ngokusasazeka kwee-0.75 iipips. I-Spot yegolide ibiza ixabiso eliphantsi kwii-0.3 iipips.
Uya kudinga ukufaka ubuncinci i- £ 250 ukuze uqalise kwi-IG, onokuyenza ngedebhithi / kwikhadi letyala okanye ngokudlulisa ibhanki. Iqonga lilawulwa yi-FCA, kunye nemibutho yokufumana ilayisensi e-Australia nase-Singapore.
Indawo yokuthengisa igolide kwii-0.3 iipipsi nje
Ubuncinci bediphozithi ephezulu kakhulu kwi- £ 250
I-75% yabatyali zimali abathengisayo baphulukana nemali xa bethengisa iiCFD kunye nalo mboneleli
2. I-Spreadex-Ukusasaza ukubheja kwiMarike yeMali kunye neMidlalo
I-Spreadex ikunika okona kulungileyo kwihlabathi liphela. Ayisiyiyo kuphela into yokubheja kwiimarike zemali, kodwa nezemidlalo. Yaziswa ngaphezulu kweminyaka engama-20 eyadlulayo yaza yalawulwa yi-FCA, uSpreadex uzenzele igama elihle kwindawo esasazekayo yokubheja.
Iqonga lixinene nezixhobo zemfundo kunye nophando, ezifanelekileyo xa usaqala. Uya kuba nokufikelela kwiimarike ezingaphezu kwe-10,000 zehlabathi, kwaye uxinzelelo lunikezelwa kwabo badlulisa itshekhi.
Siyayithanda nento yokuba ungafaka i-1 nje ye- £ xa uvula iakhawunti yakho. Ungabeka ukubheja ukusuka kwi-10p ngesitokhwe ngasinye, ke indawo ilungile ukuba ufuna ukuqala ngemali encinci.
10,000+ iimarike zezemali
Ukusasaza ukubheja kwezemidlalo
Ubuncinci bediphozithi ye- $ 1 nje
Kuya kufuneka upase itshekhi xa usebenzisa amandla
Akukho nkxaso kwi-e-wallets
3. Isalathiso seSixeko-Elona Qonga liQhelekileyo lokuRhweba ngokuBheja
Ngokusasaza abathengisi bokubheja abanikezela ngamashumi amawaka eemarike ezizodwa, uya kufuna ukukhetha umboneleli onikezela ngeqonga lokuthengisa eliphezulu. Phambili koku yi-City Index. Nokuba ufuna ukuthengisa kwidesktop yakho, ithebhulethi, okanye isixhobo esiphathwayo- ukubeka ukubheja kwiSalathiso seSixeko kulula kakhulu.
Iqonga libonelela ngaphezulu kweemarike ze-8,000, kunye nokusasazeka okuqala nge-0.5 pips kwii-FX ezinkulu. Iqonga likwanesisa kwisebe lomda, kunye nezalathiso ezinje nge-FTSE 100 kunye neJamani 30 efuna idiphozithi eyi-5% kuphela.
Iidipozithi ezincinci ziqala nge- $ 100, kwaye unokukhetha kwityala / kwityala okanye kugqithiso lwebhanki yalapha. Okokugqibela, isebe lenkonzo yabathengi kwi-City Index likalwe kakhulu, ngenkxaso ikonwabele ukukunceda ekumiseleni ukubheja.
Iqela eliphezulu lenkxaso yabathengi
Inkqubo elula yokuvula iakhawunti
Idumela elihle kwimeko yemveli yokuthengisa
Inkqubo ye-KYC inzima
Ndwendwela iSalathiso seSixeko
4. IiMarket zeCMC -Sasaza uMrhwebi oBheja ngezixhobo zoLawulo loMngcipheko
Yaziswa ngonyaka we-1989, iiMarket zeCMC yi-CFD ekwi-Intanethi, i-forex, kunye nokusasaza umrhwebi wokubheja. Inkampani idweliswe kwiLondon Stock Exchange, kwaye ineemfumba zamaphepha mvume.
Kuwo wonke amawaka ezixhobo zezezimali, iiMarket zeCMC zixhasa ii-indices, i-forex, ii-cryptocurrensets, iimveliso, izabelo, ii-ETFs, kunye nezoNondyebo. Eyona nto siyithandayo malunga nomthengisi kukuba ibonelela ngezixhobo eziphambili zolawulo lomngcipheko.
Oku kubandakanya rhoqo, ukulandela umkhondo, kunye nokuqinisekisa ii-odolo zokulahleka kokuyeka, kunye nokuyalelwa kwenzuzo. Kananjalo, iqonga likuvumela ukuba unciphise umngcipheko wokubheja kwakho ngendlela ezenzekelayo.
Amawaka emarike yezemali axhaswayo
Iiakhawunti zedemo ezingenabungozi
Uluhlu lweLondon Stock Exchange
Ifanele ngakumbi abathengisi abaphambili
Tyelela iiMarket zeCMC
5. I-FXCM- Eyona ndawo iphantsi yokuSasaza uMrhwebi oBheja
Ukuba usemtsha ukusasaza ukubheja kwaye unqwenela ukuqala ngezibonda eziphantsi kakhulu, kunokuba kulungele ukuphonononga ukufaneleka kweFXCM. Ngobungqongqo, umthengisi uyakuvumela ukuba ubheje nge-7p nganye ngenqaku ngalinye.
Nje ukuba uqale ukhululeke ngakumbi, umthengisi wokubheja osasazekileyo unikezela amandla aphakathi kwe-2: 1 kunye ne-30: 1-kuxhomekeke kwimpahla. Uya kuba nenketho yokuthengisa kwiwebhusayithi ephambili yeFXCM, okanye ngokusebenzisa iapps yayo yemveli yeselfowuni.
Xa kuziwa ekusasazeni, oku kuyahluka kakhulu ngokuxhomekeke kwizixhobo zemali. Umzekelo, unokufumana ukusasazeka kwee-0.6 iipips xa uthengisa i-EUR / USD pair pair, kodwa uya kuhlawula ngakumbi kwi-FTSE 100 stocks.
Isasazeka ukusuka kwii-0.6 iipipi
Ukuphakama phakathi kwe-2: 1 kunye ne-30: 1
Izibonda ezisezantsi ze-7p nganye ngenqaku
Ukukhethwa kweemarike kuncinci kakhulu
Isishwankathelo, ukusasaza ukubheja yeyona ndlela ilungileyo kwi-forex yemveli, kwi-CFD, okanye kumaqonga ama-stock broker. Ayisiyiyo kuphela into yokuba uyakwazi ukubeka urhwebo kumawakawaka eeasethi ekusasazeni okuxineneyo kwamanzi, kodwa zonke izibonelelo zakho azikho kwirhafu. Ngapha koko, unakho nokukhetha ukunciphisa i-asethi, okuthetha ukuba ungasenza isibonelelo nangona iimarike ziphantsi.
Nangona kunjalo, ukusasaza ukubheja kukwayingozi enkulu, ubuncinci kuba ubandakanyeka kwiziphumo zeemali ezixhuzuliweyo. Kananjalo, soloko ufaka ii-odolo zokuyeka ilahleko enengqondo ukunciphisa umngcipheko wokuba umda wakho ucinywe.
Yintoni ukusasaza ukubheja?
Ukusasaza ukubheja yinkqubo yokuthelekelela kwicala elizayo le-asethi enjengegolide, ioyile, okanye isitokhwe. Ngokuthelekelela ngokuchanekileyo wenza inzuzo, kwaye ilahleko zenzeka xa ungazenzi.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci kumthengisi wokubheja osasazekileyo?
Oku kuyahluka ngokungathandabuzekiyo kuxhomekeke kubarhwebi bokubheja osayinileyo. Ukuba ujonge ukuqala ngezibonda ezincinci, abanye abathengi bayakuvumela ukuba ubeke kwi-50 nje ye- $.
Yintoni 'ukusasazeka' ekusasazeni ukubheja?
Ukusasazeka ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso leasethi. Izikhewu phakathi kwala maxabiso mabini yindlela abasasazi ababhejayo abasasaza ngayo imali.
Ngaba ukuthengisa ukubheja kulawulwa?
Ukuba umthengisi obhejayo onwabileyo unqwenela ukusebenzela abathengisi base-UK, kufuneka ulawulwe liGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA).
Uyenza njani imali ngokubheja?
Inzuzo kunye nelahleko yakho zichongwe lurhwebo olwenzileyo. Imali echanekileyo ibalwa ngokuthatha isigxina sakho malunga nenani elipheleleyo lamanqaku apho i-asethi ihamba khona.
Yintoni ubizo lomda ekusasazeni ukubheja?
Ukusasaza abathengisi bokubheja kufuna umda xa ubeka urhwebo, eyipesenti yexabiso leasethi obheja kuyo. Ukuba urhwebo lwakho luchasene nawe ngenani elithile (yithi iipesenti ezingama-80), umrhwebi uya kukucela ukuba wenze umda wokufowuna. Oku kuthetha ukuba ngaphandle kokuba ukongeza imali eyongezelelweyo kumda wakho, iodolo yakho isemngciphekweni wokucinywa.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezisasaza inkxaso kubarhwebi ababhejayo?
Uninzi lwabarhwebi ababheja e-UK baya kukunika ithuba lokufaka imali kwikhadi ledebhithi, i-e-wallet, okanye iakhawunti yebhanki ..